China Non expansive moto retardant unhani wekunze simbi mamiriro fekitori uye vagadziri | Weicheng
Kuvaka kwakanaka: kupfira, kupfeka roller uye kukwesha kunogona kushandiswa. Strong adhesion: ine yakasimba adhesion kune epoxy mhando, alkyd mhando uye phenolic mhando antirust primer, iyo yakasimba uye yakasimba, inoshandiswa zvakanyanya, ine mhando yepamusoro uye yakaderera mutengo. Cdgc-indoor Ultra-yakatetepa simbi chivakwa moto chinodzivirira inokodzera yakakodzera kuchengetedza moto kwenhengo dzinotakura-mutoro dzakasiyana siyana simbi dhizaini mapurojekiti ane moto wekudzivirira muganho wakakura kupfuura 2 h. Zvakadai seaerospace, petroleum, indasitiri yemakemikari, simba remagetsi, simbi, dziviriro yenyika, mwenje uye indasitiri yemachira uye zvimwe zvivakwa zvekunze zvinotakura kuchengetedza moto kwesimbi inorema zvikamu, uye zvinonyanya kukodzera kune mamwe mapurojekiti esimbi ane njodzi yemoto yehydrocarbon makemikari. (senge mafuta, solvent, nezvimwewo), senge petrochemical engineering, garaji, oiri kuchera chikuva, oiri yekuchengetedza nzvimbo yekutsigira furemu, nezvimwe.
1. Usati washandisa, pamusoro pekuputira isina moto kunofanira kucheneswa nemafuta, tsvina, nezvimwe.
2. Iko kusimba kwemukati wekuputira moto kwakakwirira, uye kupfeka kunofanira kumutswa usati washandiswa.
3. Inogona kukweshwa brugwa, kupetwa kana kumwayiwa mushonga, uye iyo yekupfuura yechipiri inogona kuiswa maawa matanhatu ega ega.
4. Ukobvu hwekuputira hunogona kutsanangurwa zvinoenderana nezvinodiwa nemitemo yekudzivirira moto, kazhinji 2-6 jasi.
5. Pendi isina moto isina kushandiswa inofanira kuvharwa zvakare.
Kuomesa nguva (pamusoro pakaoma)
Pakutanga yakaoma kupokana kuramba
Bond simba MPa
Kudzvinyirira simba MPa
Kusunungura-nyungudika kutenderera kuramba, nguva
Mushure mekusimudzira, kupfeka kusingaite moto kuri muyunifomu gobvu remvura mamiriro pasina kusangana.
1-3 mitswe inobvumidzwa, uye hupamhi hwayo haifanirwe kunge hwakakura kupfuura 0.5 mm
The15 Iko kupfeka kunofanirwa kunge kusingatsemuke, kubvarura, uye kubvaruka
Inoshandiswa zvakanyanya muzvirimwa zvemagetsi (zviteshi), zvivakwa zvemazuva ano nenzvimbo hombe, hukuru hwakakura hwakawanda hwakaratidzwa, hwakavanzika simbi mamiriro moto unodzivirira kudzivirira nekushongedza.
Pashure: Yemukati intumescent isina moto kupfeka yesimbi mamiriro
Zvadaro: Isina kupfeka moto unodzivirira kupfeka kwezvivakwa zvemukati zvesimbi
Isina kuwanda moto unodzora kupfeka kweiyooo ...
Outdoor intumescent fireproof unhani kuti simbi ...
Indoor intumescent fireproof bemhapemha simbi ...